Eo Amin’ny Làlan’ny Vola Ireo Mpijirika Informatika · Global Voices teny Malagasy
Eo Amin'ny Làlan'ny Vola Ireo Mpijirika Informatika
Nandika (en) i Victoria Robertson
Voadika ny 15 Jona 2014 13:23 GMT
[Mitondra amin'ny fiteny Espaniola ny rohy rehetra, afa tsy rehefa misy filazàna mifanohitra amin'izany.]
Tsy momba ireo mpisandoka mahazo vola dollar antapitrisany no resaka eto, na dia mety ho tsy zavatra ratsy aza izany. Tsia, miresaka ny hetsika vao haingana nataon'ny fikambanana Hacks/Hackers [en] (mpijirika informatika), tambajotra ao Amerika Latina izay mampivondronana mpanoratra kaody sy mpanao gazety mba hikaroka hoe teknolojia toy inona no hahafahana manivana angon-drakitra, ary miaraka amin'izany, ahoana no fomba hampiasàna ireny angon-drakitra ireny mba ho entina hitantaràna tantara maro.
[Ny Lòlan'ny Vola: tanàna matanjaka miisa 13 ao Amerika Latina + Miami. Olom-pirenena Amerikana Latina anjatony manao miara-manoratra ny tantara, fotoana iray ahafahana manafaingana ireo tetikasa angon-drakitra misokatra ary miatrika ny “ Fetin'ny Media 2014”. Ny Sabotsy 7 Jona 2014.]
Araka ny fizaràna ao amin'ny Buenos Aires:
[…] convocamos al primer hackatón regional, un hackday en distintas ciudades de América Latina el mismo día, con una temática común: “La ruta del dinero” para explorar cuáles son los destinos de los fondos públicos en nuestros países, cuáles son las relaciones entre ellos , cuál es el volumen de la ayuda internacional y a dónde se dirige, etc.
Miaraka mikarakara ny hetsika voalohany antsoina hoe “hackathon” aty amin'ny faritra izahay, andro iray hiarahana mijirika avy any amin'ireo tanàna samihafa manerana an'i Amerika Latina, ambanin'ny faneva hoe “Ny Làlan'ny Vola”. Ho jerenay hoe aiza no handaniana ny volam-bahoaka ao amin'ny firenentsika, inona ny fifandraisana misy amin'ireo, ohatrinona ny fanampiana avy any ivelany tafiditra ao ary koa hoe aiza daholo ny làlan'izy ireo, sns.
Roa sosona ny tanjona tiana ho azo: amin'ny lafiny iray, mba handrisihana ny fangaraharàna, fitantànana mahomby ny volam-bahoaka, ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena, ary eo ankilany, hahazo vokatra amin'ny lahatsoratra soratan'ireo mpanao gazety momba azy io, sy hanome vàhana ny famoronana ekipa mpikaroka loharanom-baovao afaka mifanakalo hevitra.
Hanambatra ekipa maro manana traikefa samihafa avy amin'ny taranja marobe anà Hacks/Hackers eto an-toerana ilay hetsika, izay hatao ny Sabotsy 7 Jona 2014, any amin'ny tanàna tahaka an'i Asunción, Bogotá, Buenos Aires, Guatemala, La Paz, Lima, Mendoza, Mexico City, Miami, Montevideo, Rosario, San José, San Pablo sy Santiago.
Raha tsy ampy handresen-dahatra handraisana anjara ny fiasàna hanampiana ny olom-pirenena mba hahatongavana amin'ny fisian'ny mangarahara eo amin'ny fampiasàna ny volam-bahoaka, misy fandrisihana iray fanampiny koa, dia ny loka lelavola izany: ireo tetikasa dimy mandresy amin'io dia mety handray lelavola mitentina 2.000 dolara Amerikana sy loka lehibe 10.000 dolara Amerikana avy amin'ny HacksLabs.org, fandodona voalohany ho an'ny angon-drakitry ny fanaovan-gazety ao Amerikana Latina.
Manoratra [en] ao amin'ny tranonkala “ijnet”, milaza izao i Mariano Blejman avy ao amin'ny HacksLabs:
Ilay hackathon dia haorina ary haka aingam-pahany avy amin'ny sasany amin'ireo tetikasa lehibe manara-maso ny momba ny vola izay manomboka mitombo maka toerana aty amin'ny faritra sy maneran-tany, toy ny VozData, tetikasa iray an'ny gazety an-tsoratra La Nación (Arzantina) izay mamakafaka ny fandaniam-bolan'ny antenimieran-doholona Arzantina. Ny tetikasa Afrikana Aiza Avy ny Lalan'ny Volako? manadihady raha toa ka mamerina marina any amin'ny mponina ny 3 isan-jaton'ny tombombarotra azony izay takian'ny lalàna tokoa ireo orinasa mpitrandraka ny harena an-kibon'ny tany ao Ganà. Ary ao amin'ny Vondrona Eorôpeana, mieritreritra ny hampibaribary mazava kokoa ny amin'ilay vola 55 andavitrisany euros izay nolaniana tamin'ny fanampiana ny tantsaha ny tranokala Farmsubsidy.org.
Sady izay indray, ao amin'ny Hacks/Hackers, raha toa ka misy olona tena te-hikarakara hackathon, nefa tsy mahalala hoe aiza no hanombohana azy, misy taridàlana amin'ny teny Espaniola afaka arahany. Misy ireto manaraka ireto anisan'ireo torohevitra nomena:
Ny fikambanamben'ireo mpanao gazety no fon'ny Hacks/Hackers, saingy ny fikambanamben'ireo mpanoratra kaody kosa no milina manodina. Tadiavo ireo mpanao gazety fanta-daza, ireo tena manam-pahalalàna amin'ny informatika, ireo izay vonona ny hanova ny fomba fiasà miainga avy ao anatiny. Ireo mpitoraka bilaogy ihany koa izay vonona ny hanoratra mikasika zava-baovao vao misonga. Reseo lahatra ireo mpanao gazety ireo mba hamoaka tantara mikasika ilay hetsika, mba hanampy amin'ny fanatsarana ny mombamomba azy. Tena zava-dehibe amin'ny hetsiky ny fikambanana mihitsy ny manana tambajotra-nà mpanao gazety ho mpikambana ao aminy.
Afaka mampakatra ireo heviny ao amin'ny HackDash del evento sahady ireo mpandray anjara. Mandehandehana ao amin'io tranonkala io, mety hitontona amin'ny zavatra afaka angalanao hevitra ho an'ny tetikasanao manokana ianao!
Farany fa tsy ambanin-javatra, eo ambany elatry ny Hacks/Hackers ny hackaton Follow the Money (Araho ny Vola) ao amin'ny faritra ary ampahany feno ao anatin'ny fandaharanasan'ny media mitondra fanavaozana, fandaharanasa tohanan'ny Foibe Iraisam-pirenena ho an'ny mpanao gazety, ny Knight Foundation, ny Knight Mozilla Open News, ny PinLatam, ary ny Ivontoeran'ny Banky Iraisam-pirenena ao Amerika Latina.
Afrika Mainty 23 ora izay